Igama leKhemikhali: Chlorine dioksayidi enye Powder.
Iipropati: I-chlorine dioxide Inxalenye yomgubo ngumgubo onokuthuthwa, ongadubuliyo wento enye, ethi yakongezwa kumthamo othile wamanzi, iphendule ngokupheleleyo kwisisombululo esisebenza ixesha elide.
Igama leKhemikhali: I-Chlorine Dioxide Powder Kit / i-chlorine dioxide izixhobo ezimbini zecandelo
Iipropati: I-klorine diokside enezinto ezimbini ezingumgubo, yinto enokuthi ithuthwe, ingabinasiqhushumbisi somgubo wamacandelo amabini athi, nje ukuba ongezwe kumthamo othile wamanzi, asabele ngokupheleleyo kwisisombululo esisebenza ixesha elide.
I-Gel ye-Sterilizing yi-chlorine dioxide esekwe, elawulwayo izinto ezikhutshwayo ezizinzileyo. Ibandakanya ibhegi enye yomgubo kunye nebhotile yokukhupha. Yongeza nje umgubo emanzini kwibhotile yokukhupha, kwimizuzu embalwa kamva, ijeli yenziwa. Emva koko, iqala ukukhupha i-chlorine dioxide gas kwindalo esingqongileyo. Ijeli yokucoca inokusetyenziswa njengesicoci somoya kunye nesiporho sokuvumba kunye nolawulo lwebhayoloji kwindawo evaliweyo, ezinje ngeemoto, iifriji, iifriji, izindlu, iiofisi, amathala eencwadi, izindlu zangasese, amagumbi okugcina njalo njalo.
Ubukhulu: iintlobo ngeentlobo zeemilo kunye nobukhulu
Ukusetyenziswa: Uvavanyo lomlilo, ukunyibilika kwegolide, isilivere enqabileyo
Izinto: Alumina yodongwe, Alumina yodongwe, Udongwe
Ubukhulu: 20g / 30g / 40g / 45g / 50g / 55g / 65g / 75g